Mmetụta Nkuchi na Mgbanwe | Martech Zone
Mmetụta Nkuchi na Mgbanwe
Tuesday, October 27, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ana m agụ Kevin Eikenberryakwụkwọ, Idu Ndú Dị Unrịba Ama: lehapụ Onye Ọchịchị Gị Nwere Ike Pot Ga-erubere Gị Isi Otu Oge na Kevin ga-a coffeeụ kọfị echi. Ọ bụ a kediegwu akwụkwọ - na otu isi n'ezie kụrụ n'ụlọ na m mmeri mgbanwe.
Kevin na-atụle mgbanwe na nnukwu nkọwa. Otu n'ime amaokwu ndị Kevin ji mee ihe bụ akwụkwọ 1962 nke Everett Rogers dere, Mgbasa nke ihe ohuru. Ọ bụ tiori guzobere ule oge-na-enye nghọta banyere otu anyị si ewere teknụzụ. Nkọwa ahụ bụ:
Ọbụna ihe na-adọrọ mmasị bụ mgbe ị na-enyocha nkuchi n'oge oge. Nke a bụ ụfọdụ ihe atụ nke nnabata ọhụụ:
Nke ahụ kwuru, echeghị m na ọ dị onye tụlere ma ọ bụ tụọ mmetụta azụmahịa nke ikuchi. Otu n'ime ndụmọdụ m na-enye ndị ahịa bụ na, ozugbo usoro pụtara ìhè mana akabeghị isi, ohere maka mmetụta na azụmaahịa gị buru ibu. Ka oge na-aga na azụmahịa na-eleghara nkuchi ahụ anya, ha na-efunahụ ikike nke mmetụta ahụ. Nke a bụ usoro eserese m:
M na-ele dị ka ụlọ ọrụ na nwetara oke oge na ihe ohuru a na-emeghi ohuru wee tinye ego na itinye ego na teknụzụ ndị ahụ, na-efunahụ ọtụtụ n'ime ya. Otu ihe atụ nke oge a bụ igwe ojii igwe ojii. Ndị mmepe mbụ na ndị toro eto na teknụzụ mefuru nde mmadụ ma ha enwetaghị uru ya; otu o sila dị, ha meghere ụzọ maka igosipụta teknụzụ ahụ. Ozugbo egosiri, igwe ojii na-arụ ọrụ ugbu a anaghị adị oke ọnụ ma na-eto n'ike n'ike na nnabata ya. Mmetụta na azụmaahịa na-eji igwe ojii agbakọ ugbu a buru ibu… mana ka a nabatara ya n'ime ụlọ ọrụ ahụ, ọ gakwaghị abụ uru asọmpi - ọ ga-abụ isi.
Ka ị na-enyocha ngwakọ ahịa gị ma na-eleghara ịdị mkpa nke ọdịnaya, ịde blọgụ azụmahịa, njikarịcha ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta… na-efu ohere isonyere ndị ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị nabatara iji metụta azụmahịa gị. Can nwere ike ịga n'ihu ichere - ọ bụ n'ezie mma ụzọ ọpụpụ. Ka o sina dị, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na nwatakịrị e kuchiri gị obere oge nwere obere azụmaahịa gị. N’ezie, ọ pụrụ ịdị mkpa ka i mee nwa nanị iji nọgide na-asọrịta mpi n’ọma ahịa.
Dịka onye ahịa na teknụzụ, ekwenyere m na ọ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ na-esochi jiri teknụzụ. Anaghị m ekwupụta na ụlọ ọrụ niile kwesịrị ịmalite ma were oge. Ihe m na-ekwuputa bu ka ulo oru di iche-iche matara ohere ndi ekpuchitere n’oge, ya na nsogbu ya nwere ike buru ma oburu n’itinye nsogbu ha n’oru. Azụmaahịa ọ bụla nwere nsogbu na teknụzụ na-agbanwe agbanwe nwere ike ịbụ ezigbo ngwọta maka nsogbu ndị ahụ.
Otu ihe atụ: Ọ bụrụ na ị bụ azụmaahịa na - alụ ọgụ maka inbound marketing ma na - eduga nke ọma ugbu a, ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịzụ ahịa injinia, mmepe ọdịnaya (ịde blọgụ azụmahịa) yana ịgbasa ọdịnaya gị na netwọkụ dị mkpa (ịkparịta ụka n'socialntanet). Site na ịmalite n'oge, ị nwere ike ịmalite ịmalite ndị asọmpi gị wee nweta oke ahịa. Ọ bụrụ n ’ichere, ị ga - eme ihe ndị a ka ị gaa n’ ọdịnihu… oge ị ga - enweta inweta gafere.
MC Hammer 2.0 na Mbido Onwe Onye
Ajụjụ ọnụ nke Steven Woods: Asụsụ Ahụ Isi